Ogaden News Agency (ONA) – Salaad ooge Waa Nin Muslimiinta Ethiopia kamida oo kaligiis u bar-dhigay Ciidamada Woynaha
Salaad ooge Waa Nin Muslimiinta Ethiopia kamida oo kaligiis u bar-dhigay Ciidamada Woynaha
Waxaa khadka social Media ee shacabweynaha ku hoos nool gumeysiga Ethiopia ay waayadan baafinayeen nin Muslim ah oo Salaada Ciidi Ciidul-fitriga ku hor tukanayay kaligiis Boqolaal askara oo ku hubeysan ulaha iyo qoryaha lagu ciqaabo dadka mudahaaradaya. Ninkan oo sida sawirka ka muuqda kamid ahaa dad badan oo ku tukunayay salaada Ciidul-Fidriga Magaalada Addis Ababa, ayaa sida loo jeedo waxaa goobtii lagu tukanayay xoog looga kiciyay shacabweynihii ku takanayay halkaas.
Sida sawirka ka muuqda se waxaa goobta ku soo hadhay nin muslim ah oo Salaadiisii sii watay isaga oo aysan ka muuqanin wax cabsi ah, ama dareen jixinjix ah. Ninkan ayaa waxaa hor taagan boqolaal askar ah oo kusoo socda si ay u garaacaan waxii horyimaada. Balse markey arkeen dhiiranaanta ninkan mulsimka waxaa istaagay, ciidankii kusoo socday, waxayna saf dheer u galeen hortiisa iyaga oo kusoo dhici waayay inay ninkaas salaada ka kiciyaan.
Geesinimada iyo kartida shacabka muslimiinta ku nool Ethiopia ayaa noqotay mid lama filaan ku ah Gumeysiga Ethiopia. waxaa wadanka Ethiopia xabsiga la dhigay dhamaanba Aqoonyahankii iyo waxgaradkii kasoo jeeday muslimiinta Ethiopia. Muslimiinta Ethiopia ayaa muddo aad u dheer kusugnaa aamusnaan iyaga oo ka dhex muuqanin siyaasada Ethiopia iyo guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada Ethiopia. Waxayna ahaayeen dad u badan ganacsato oo masaajida isaga jira.
Gumeysiga Ethiopia ayaa hadaba intii yareed ee heysteen ugu yimid kadib markii loo diiday inay si xor ah u caabudaan Allaah kuna dhaqmaan madhabtooda. Woyaanaha Ethiopia ayaa wada xidh xidhay culaa u diinka Ethiopia iyo cidkasta oo isku dayaysay inay dhaqdhaqaaqa muslimiinta hoggaamiso.
Waxaa markii u horeysay Wadanka Ethiopia kasocda dhaqdhaqaaq muslimiinta Ethiopia oo idil ay ka simanyihiin. Tusaalaha iyo geesinimada iyo adkeysiga ay la yimaadeen Muslimiinta Ethiopia waxaa cadeyn u ah Maalintii Ciida Al Ftir Banaanbaxyadii ay muslimiinta Ethiopia isugu soo baxeen.
Inkastoo dad aad u tiro badan ciidamada Woynaha Ethiopia laayeen maalintii Ciida, dadkale oo aad badana ay xabsiga u dhaadhiciyeen, jidh dil iyo dhibaato kalena ay kusameyeen. Hadaba adkeygsa iyo masoo jeestayaasha u halgamaya diintooda iyaga oo waliba si nabad galyo ah u banaanbaxaya waxay caalamka iyo qofkasta oo waxgarad ahba tusinaysaa kacdoonka xoogan ee mulsimiinta Ethiopia.
Muuqaalkaas ninka dhalinyarada ahi muujiyay waxay cadeyn u tahay Geesinimada iyo burburka kusoo food leh Woyanaha Ethiopia.